Horyaalka Talyaaniga oo dib loogu celinayo qaabkii 18-ka kooxood! – Gool FM
Horyaalka Talyaaniga oo dib loogu celinayo qaabkii 18-ka kooxood!
(Roma) 19 Sebt 2016 – Madaxwaynaha xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ee Federcalcio jaalle Carlo Tavecchio ayaa rumaysan in haddii horyaalka Talyaaniga dib loogu celiyo qaabkii 18-ka kooxood ay taasi sare u dhigi doonto tayada horyaalka.
Madaxa xiriirka kubadda cagta ayaa muddaba u ololaynayay in la dhimo tirada kooxaha Serie A, balse waxaa ka hor imanaysay mucaaradad xooggan.
Taasoo keentay in waloow uu markii hore qorshaynayey inuu is beddelkani dhaco sanadkan 2016 uu aqbalo inuu arrintan riixo 5 sanadood oo kale.
“Waxay kordhin doontaa heerka tayada farsamo ee naadiyada iyo xitaa taageerayaasha ciyaaraha soo aada, todobaadkan ayaana la kulmi doonaa hay’adda horyaalka maamusha si aannu si deggan ugu riixno qorshahan, balse ma sahlanaan doonto.” ayuu yiri Tavecchio.
Kooxda ugu XUN usbuuca ee horyaalka Premier League oo la soo saaray iyo Man United oo boosaska ugu badan ku leh